Ndeha hamafy… | Fikambanana Voa Maha-Mpino
« Ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo: indro, hanan’anaka ny virijina ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela – amintsika Andiamanitra. » (Isaia 7:14).
Fomban’Andriamanitra ny manome famantarana amin’ny fifandraisany amintsika olombelona. Andriamanitra mantsy dia fanahy, tsy hita maso ary tsy manam-peo; efa isan’ny famantarana goavana nasehony antsika ny Teniny izay ampitondrainy ireo mpanompony maro hatramin’ny niandohan’ny tantaran’ny zanak’olombelona ka hatramin’izao, ary mbola hitohy izany. Famantarana lehibe maneho ny maha-Andriamanitra tsitoha azy ny fanomoronany izao tontolo izao sy ny mbola ihazonany azy mandraka ankehitriny ; ary eto amin’ity faminaniana nataon’i Isaia ity dia famantarana lehibe ny nanomezany antsika Ilay Mpamonjy hanavotra sy hanafaka izao tontolo izao amin’ny fanagejan’ny ota.
Kanefa izao ny fanontaniana: izaho sy ianao ve mahita ilay famantarana? Izaho sy ianao ve mahafantatra ny tiany ambara amin’ilay famantarana? Efa noraisinao ho anao tokoa ve izany famonjena izany ka nanova ny fiainanao sy hanananao ilay fiainana mandrakizay? Maro tokoa mantsy ireo mahita sy mandre ilay famantarana ihany, saingy tsy mino, tsy mandray ary tsy manaiky ilay hafatra entiny. Io anefa no lakilen’ny fiainana miaraka amin’Andriamanitra, dia ny mamantatra ireo famantarana miseho amin’ny endriny maro ifandraisany amintsika: amin’izay zavatra henontsika, izay zavatra hitantsika, ny sehon-javatra eo amin’ny fiainantsika sns. Elifaza dia nananatra an’i Joba nanao hoe « Mifankazara amin’ny Tsitoha ianao, dia hiadana; izany no hahatongavan’ny soa aminao. » (Joba 22:21).
Te-hiadana ve ianao? Mifankazara amin’ny Tompo ary ianao, dia ho hitanao ireo famantarana hitantanany ny fiainanao; ho renao mandrakariva ny feony mampianatra anao; ho tsapanao isan’andro ny fitiavana itahirizany anao. Amin’izao vaninandro ankalazana ny nahaterahan’ny Mpamonjy izao dia mirary soa ho anao mba hanehoan’ny Tompo izay famantarana sahaza ho anao tokoa ianao!